PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-27 - ES'KHALENI:
Ilanga langeSonto - 2017-08-27 - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE
KUBUKEKA kungaba yisixazululo esingavuna zombili izinhlangothi ukuhlukana ngokuthula phakathi kwekaizer Chiefs nosteve “Mphathi” Komphela ongumqeqeshi wale kilabhu edume ngokuwola izinkomishi eningizimu Afrika.
Ukuhhewulwa okwenzeke kukomphela ngemuva komdlalo lapho ichiefs ihlulwe khona yisupersport United ngo-2-1 ngolwesithathu egoli, kuyizinkomba zokuthi abalandeli sebedinwe kwaze kwafika ekutheni bahluleke ukulawula ulaka lwabo ngenxa yesimo esingesihle esikhungethe ikilabhu eyigugu kubona.
Ukomphela ufike kwichiefs ihambela phezulu ngemuva kokunqoba inkomishi ye-absa Premiership neyemtn8 ilolongwa ngustuart Baxter osecija ibafana Bafana.
Naye ubaxter unqobe izinkomishi ngabadlali abangatheni kwa- zise ichiefs seyimanqika ukungena ephaketheni ithenge abadlali abanohlonze.
Bengingomunye wabebenethemba lokuthi ukomphela uzokwenza kahle kwichiefs njengoba ebeshiye kwimaritzburg United eyifake kwi-top 8 okokuqala emlandweni.
Kunokuthi aqhubeke nomsebenzi omuhle kabaxter, kubukeka isimo sonakale kakhulu njengoba sekuphele amasizini amabili iziMpofana zingayazi nhlobo inkomishi.
Ukubeka izaba ngokubheda kwezinkundla ngikuthatha njengophawu lokuhluleka. U-allan Freese ubambe izintambo kwiPlatinum Stars wayinqobela IMTN8 netelkom Knockout ehlula i-orlando Pirates kowamanqamu ngesizini eyodwa. Ufadlu Davids uthathe izintambo kuroger De Sa kwiteam of Choice isizini iphakathi kodwa wayifaka kwi-top 8. Kumanje iteam of Choice ikuma- semi-final alo mqhudelwano, futhi isayinqobe yomibili imidlalo yokuvula ye-absa Premiership.
U-eric Tinkler uthathe izintambo kwicape Town City ebibunjwa kabusha wayinqobisa itelkom futhi wayifaka emidlalweni yecaf Confederations Cup. Icity ibisembangweni wokunqoba ipremiership ngesizini edlule. Kumanje usefake isupersport United kuma- semi-final EMTN8 efika nje. Pho kubambeni kanti kukomphela osekunesikhathi ekulo mkhakha?
Ubuya kwimanning Rangers, Dynamos, SA U/23, Team of Choice, Free State Stars nakwiPlatinum Stars.
Uke wathi qu nakwibafana Bafana engumsizi kapitso Mosimane, kanti uke wabamba umdlalo owodwa njengebamba.
Ukomphela ungumqeqeshi osekunesikhathi eyibambe kulo mkhakha wokuqeqesha kodwa sekuyophela iminyaka engaphezu- lu kweli-15 enganqobi nkomishi. Ngiwabona emancane kakhulu amathuba okuthi kube khona ukujabula akulethela abathandi bechiefs njengoba sekuyisizini yakhe yokugcina lena esanda kuqala.
Kube ngconywana kweyokuqala ngoba ukwazile ukufinyelela kwemibili yamanqamu, kwathi ngeyedlule kwabheda kakhulu. Ukomphela ungomunye wabaqeqeshi abahlonishwayo kuleli, ngakho kakukuhle ukuthi avumele isithunzi sakhe sidicileleke phansi ngalolu hlobo.
Ngokunjalo nechiefs iyikilabhu enkulu futhi ehlonishwayo ngakho kakubukeki nxa kuphela amasizini amabili inganqobi nkomishi.
Cishe ukuhlukana yisona sixazululo esingaletha ukuthula kuzona zombili izinhlangothi. Ukujula kobuchopho bukakomphela kangikungabazi ngoba bengike ngizihlalele naye ezihlweleni nxa kunemidlalo ebihlelwa ngabakwaMetropolitan ejutshwe yisouth African Football Association (Safa). Kunenqwaba yabadlali abadlala emakilabhini e-absa Premiership abebaqoka phambi kwami. Kwesinye isikhathi ubeke asicele sinozakwethu uzwelakhe Ngcobo ukuba simbonise abadlali abenza kahle nxa efike umqhudelwano sekunesikhathi esijanyana uqalile. Lokhu kusho ukuthi unalo ikhono, inkinga ngathi ulandelwa yishwa kwezokuqeqesha njengoba izinkomishi zimphika.
Lokhu ngikusho ngoba ungumqeqeshi onenhlanhla yokuthola umsebenzi kodwa izinkomishi zingabasemzini.
Ukuqeqesha inqwaba yamakilabhu unganqobi lutho kuyefana nokomfundi oqhosha ngokuthi usefunde ezikhungweni zemfundo ephakeme ezahlukene kodwa engenaso ngisho esisodwa isicucu ngenxa yokugqoza kwemiphumela emihle.